Umlingisikazi Tatyana Kolganova: Biography, empilweni yakho
Ngubani akazi uyathakatha enhle nedlubulundayo yochungechunge "Black Crow"? Washeshe bathandile zonke izibukeli. Ngenze nale indima actress Tatiana Kolganova. Filmography lokhu abesifazane abanamakhono namuhla kumba eqolo, kodwa wayengumuntu omkhulu uyathakatha Zakharzhevskaya ka "Black Crow" Wamupha esihle emhlabeni cinema. Ngaphandle kokukhetha, actress Heroine of nokubukisa ezahlukene futhi abangele uzwela izethameli, yize kuyintando uhlamvu negative noma positive. Kolganova Tatiana - actress, ngubani ngamunye emsebenzini wakhe ubeka inhliziyo yakhe nangawo wonke umphefumulo, futhi baziswa izethameli esibonga: sekuwumkhuba owaziwa futhi ethandwa kakhulu emhlabeni cinema.
Umama uTanya wahlala e-Odessa futhi wasebenza ukuhweba, bekulokhu yoMnyango Inhlangano. UPapa edolobheni elihle ababebakhonza umkhumbi. Itilosi Handsome iwine inhliziyo intombazane futhi ithole imvume emshadweni bonke eningabafumana. Lapho kuye kwaba khona emkhayeni Kolganova umthamo wemvula, bashukumiseleke Moldova lapho efundela ugogo wakhe. Isekelwe emzini Balti, abazali Tatiana sika agubha usuku lokuzalwa indodakazi yabo yokuqala, ebizwa ngokuthi Alena. Ngo-1972, ngo-April 7 wazalwa Indodakazi yesibili uTanya. Ubaba wayenethemba lokuthi indodana, kodwa ayemiselwe bahlala ithimba labesifazane.
Njengezinye amantombazane amaningi, Tatiana Kolganova Wayefisa ukuba umdlali waseshashalazini, kodwa ngokungafani abanye wayengenayise umgomo: yena wayefuna ukuveza ukuthi konke uhleko, ekhala izinyembezi futhi eminye imizwa ukuthi izilaleli ubona esikrinini, yangempela. Le ntombazane wayeqiniseka ukuthi abadlali ukukhombisa izilaleli imizwa yangempela ukuthi ayikwazi ukudlalwa. Kamuva, ekubeni actress yangempela, ukuthi ngempela ngokuphelele ukujwayela isithombe esisha ngasinye futhi siphile izimpilo namaqhawekazi zabo, kanye nabo, bayahleka, ukukhala.
E Balti studio waseshashalazini kwaba eNdlini izikhulu. Kwaba kukhona ukuthi uTanya waqala azilungiselele ikusasa oyibamba. Nakuba intombazane esikoleni, yena uyinkosi ezokwenza aze abe nowakhe Leningrad. Lo muzi Kolganova ikusasa labo, lapho ayefuna ukuba ziphile futhi zisebenze. Akumangalisi ukuthi ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme futhi wathola kahle deserved esiliva ngendondo, uTanya waya emzini amaphupho.
isikole ngemuva kwethu, ngesitifiketi nesiliva indondo waya Tatyana Kolganova ayesifuna ngabomvu Petersburg, lapho wawuhlala okokuqala indodakazi umngane kamama ebuntwaneni. Ngezinye nesikhombisa, ukuphila kubonakala ephelele, kodwa uTanya wayelinde ukuphoxeka esabekayo. Reception Theatre Institute usegxeke Commission for Owesifazane Odessa uthi.
Tatiana ekhaya wayecabanga ukuthi ngeke, ngakho imibhalo ungeniswe kumphatsi wesifundvo Institute of Culture okuthiwa Krupskaya. Ngithole kube lula, elinde izifundo zakhe e-faculty of oqondisa nemdlalo. Zonke lezi zenzakalo zenzeka ngo-1989, iminyaka emithathu umfundi abangalawuleki futhi wavela phambi othisha Theatre Institute. Lesi sikhathi ukuthi kwenzekeni: Manje Kolganova wafunda e amanyuvesi amabili. Ngenxa yamandla ongashi yena ukusingatha umthwalo ongako, ngisho wakwazi inkanyezi movie "Izinsuku yesimo sezulu esibi" e indima Angela. Kwaba DEBUT yakhe esikrinini. ebuntwaneni amaphupho waqala zagcwaliseka!
Ngemva kokuphothula kulesi sikole ngo-1996, Tatiana Kolganova waqala umsebenzi yaseshashalazini ngokuthi "Okosomahlaya". Lapha yena eyayihilelekile kudlala ezifana "Trouble kusukela yamathenda Inhliziyo", "Pansies" nesithi "Tale of kwamawele." Ekupheleni isizini eyodwa nje, actress abasha ushiya esigabeni "Okosomahlaya" - naye wamenywa ukuba ayosebenza e-Czech Republic.
Ukuvakashela eCzech Republic
Lapho efika ePrague Tatiana sivunyiwe esikhundleni sokuba isikhulumi emsakazweni "Freedom". A umsebenzi omusha ekuqaleni ethanda intombazane, kodwa ke waba eliye isidina ukubhekana nsuku zonke okufanayo. Kodwa ngokushesha umyeni wakhe, kanye Vlad Lanné okubhale webhayisikobho wakhe. Czech Ithelevishini uthenge futhi yasekela lo msebenzi umsebenzi, ukuze uTanya sibonwe yomqondisi Petr Nikolaev. Wamfaka indima ifilimu yakhe "Izimpisi emzini." Ngemva actress Russian ukhanyisé Czech Ithelevishini, wabizwa ukuba umninikhaya zohlelo mayelana cinema. Tatiana Kolganova waba ngowokuqala Russian TV umethuli eCzech Republic.
Uchungechunge oluthi "Black Crow" wabuya Kolganov eRussia
Konke ukuphila a young intatheli yezindaba zethelevishini savela kahle, kodwa ngangingazi ukuthi ngizokwenzani ukuthi ephupha kusukela ebuntwaneni. Tatiana wayemagange ukubuyela ebhayisikobho. Ngaleso sikhathi, kwaba uchungechunge imfashini, futhi kuba iphrojekthi actress ngiphuphe eside egijima ezinjalo. Mayelana dream Kolganova ukwazi yonke abangane, futhi wazikhandla ukuze amsize.
Ngolunye usuku, ngiphakamisa ucingo, uTanya wathola ithuba inkanyezi ochungechungeni TV "Black Crow". Bekufuze ingafeza lukhulu. Ngemva kwalokho ucingo izinyanga ezimbili elinde isiqinisekiso actress kanye isimemo lesi sigameko. Waze waqala ngisho ukucabanga ukuthi kwaba ukhohliwe, futhi Tatiana Zakharzhevskaya izodlala nezinye. Waze kwamenza waba Imi iDemo, nakuba isimo izinwele uhlamvu wakhe Kufanele ibe mide.
Ngosuku lwesibili ngemva kokuya kwihendisethi wezinwele actress izwa amazwi angcwele "Esiphuthumayo flied out ukudubula!" Amagama awakwazi ukuveza indlela ajabule ngayo ngokuchitha Tatiana Kolganova. Film credits, ungasho kwaqala lolu chungechunge. Kwaba isiqalo yimpumelelo emhlabeni cinema; kwaba into njalo wafuna le ntombazane lisebenza.
Emuva e-Russia, Tatiana baphuthuma studio, lapho eqala wabona Dmitry Veresov. Nguye wabhala iskripthi yochungechunge. Ukubheka Kolganov, screenwriter, wathi akukho isampula kuyadingeka: Nokho indima uyathakatha abasha got uTanya, ngesikhathi ukuqopha ayenakho ukugqoka iwigi eside. Kwaba uyabajabulela actress ngo-2001.
Kolganova Tatiana - yaseshashalazini kanye ifilimu actress
Umsebenzi wokwakha "Black Crow" yathatha iminyaka emithathu, kodwa angazi ukuthi iyeke actress Inkanyezi kwamanye amafilimu. Futhi ngo-2001, uSergei Bodrov bammemela inkanyezi e ifilimu yakhe 'Izelamani ", futhi Tatiana ukudlalwa uNatasha wakhe. Ngo-2003 Kolganova kwaphinde ababemenyelwe nokudutshulwa chungechunge. Lesi sikhathi, yena wadlala Khabensky e ifilimu "Destiny Lines". 2004 uletha actress Alla indima kuphrojekthi "Dade." Tanya ngokwemvelo owesifazane ngokuphamazela, lisebenza futhi ngokungakhathali. ukuminyana okunjalo kuyamjabulisa kuphela yayo, icindezele futhi baphawula. Manje akeve ethandwa futhi funa, ukushoda izipesheli ukwenza khona, ukuze Tatiana kungenziwa ngokuthi ngempela lucky: career yakhe njengomdlali waseshashalazini movie kuhlulekile.
Tatiana Kolganova: uthando ukuphila
Zonke Heroine Tatiana Kolganova kuhluke ukuthi banamandla, abukhali, bazethembe nokuba abafundi uluhlaza. Kodwa lokhu ukuphila esibukweni. Kkakaya uTanya empeleni? Ingabe umndeni nomyeni wakhe, yena siziphathe ngendlela efanayo njengoba kumafilimu yakhe? Yiqiniso, lena akuyona ngakho: actress emshadweni. Nakuba amakhaza ayeshubisa intukuthelo hot, wayeshaye phansi umuntu wayenomusa futhi enozwela, ungathembela ezikhathini ezinzima. Nginomyeni ayenakho ukuqonda ngokugcwele, mhlawumbe yilokho okugcina ndawonye iminyaka eminingi.
Nashade naye Tatiana lalihlangana umfundi. Ngo-1992 Kolganova futhi ingane afunda nayo Skvirsky semthethweni nobuhlobo babo. Vadim odabuka Baku, wazalwa ngo-December 1970. Ngemva kokuthola iziqu Institute, eye waphumelela njengomqondisi, screenwriter futhi umlingisi. Umkakhe safinyelela ngaphezulu, kodwa kwadingeka namthelela nobuhlobo babo, phakathi kwawo kukhona wawungekho umona, umhawu yokungezwani.
Ngemva kokufunda Biography of actress, kungashiwo wagomela ukuthi ukuphila kwakhe kwaba yimpumelelo. Konke lokhu kuyiqiniso, kodwa kukhona into njalo nokudabuka uthi Tatiana Kolganova. Izingane - lokhu yikho okwenza ukuba umdlali ukuze kube buhlungu, ngoba esemncane engazala ingane. Umama Young Tatiana akuyona ezizoba, futhi yilokhu ayekufuna yadabuka. Vadim iyazwelana yokuthi umsebenzi ithatha kakhulu yokuphila umkakhe, ezama uyigcine ngenxa yobuthakathaka. Tanya ngomyeni wakhe efana ngodonga lwamatshe, okungukuthi injabulo yayo besifazane!
I amahlaya engcono emhlabeni nge amahlaya "ukuhlanzeka"
Actress British Dzheyd Remsi
Uchungechunge oluthi "Deadwood": ukubuyekezwa, sakhiwo, ukubuyekezwa, abadlali kanye izindima
Amahle original mayelana nesimo iso
Goddess Freya - unkulunkulukazi wothando. Indlela ukuxhumana unkulunkulukazi Freya: imicikilisho yokusebenzelana
Blinds: isithombe, umbala. Indlela ugeza mpo Indwangu amakhethini?